Ei Thandar Thet, Author at Chelmo News Portal
Author: Ei Thandar Thet
Home›Author: Ei Thandar Thet
Ei Thandar Thet
တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ Korean Drama Actors 10ယောက်က ဘယ်သူတွေလဲ?
ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်ကိုရရှိထားတဲ့ ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသား(၁၀)ယောက်ကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်နဲ့ တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲတည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ (10) Seo In Guk Seo In Guk ဟာလဲ ပရိတ်သတ်တွေချစ်ရတဲ့ ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလမ်းကြောင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတာကတော့ အဆိုတော်အနေနဲ့ဖြစ်ပေမယ့်လဲ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်မှာလဲ မခေသူလေးပါ။ ...
ချွေးပေါက်ကျဉ်းအောင် ဒါတွေနေ့စဉ်လုပ်ပါ (၁) မျက်နှာကို သန့်စင်အောင် နေ့စဉ် ပြုလုပ်ပါ။ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာသုံးပြီး မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။(တနေ့ နှစ်ကြိမ်ထက် မျက်နှာပိုမသစ်ပါနဲ့) (၂) ချွေးပေါက်ကျဉ်းအောင် ဝက်ခြံဖြစ်တတ်တဲ့နေရာတွေကို ရေခဲတုံးလေးတွေနဲ့ ကပ်ပါ။ တခါကပ်ရင် စက္ကန့်သုံးဆယ်ကြာတင်ထားပါ။ (၃) ပြီးရင် ဆိုဒါမှုန့်နဲ့ ရေနွေးကို ဆတူရောပြီး ရလာတဲ့ ...
ရေသည် လူတို့၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လှပါသည်။ထို့ကြောင့်လည်း ရေအသက် တစ်မနက်လို့ ပြောကြတယ်ထင်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ရေကို စနစ်တကျ သောက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သောက်သင့်သည့်အချိန်တွင် သောက်သင့်သည့် ပမာဏကို သောက်သုံးပါက ခန္ဓာကိုယ်ကို အထိရောက်ဆုံး အကျိုးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေသောက်သုံးသင့်သော အချိန်များ နံနက်အိပ်ယာထထချင်းတွင် ...
Juneလမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များ
ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Juneလမှာ မွေးဖွားတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ပျိုမေတို့ရေ Lee Min Hoo အားလုံးချစ်ကြရတဲ့ မင်းသားချော Lee Mn Hoo ကတော့ June လ ဖွားဖြစ်ပါတယ်။ မွေးသက္ကရာဇ်ကတော့ June 22, 1987ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Kim So Hyun ...
အချစ်ရေး ပျက်စီးတော့မည့် လက္ခဏာ (၉)ခု
ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးတွေ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကို မရောက်ခင်မှာ အခြေအနေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက္ခဏာတွေကို တွေ့မြင်ခံစားလာရပြီဆိုရင် နှစ်ဦးကြားက အချစ်ရေးကို အချိန်မှီးပြန်လည်ပြုပြင်မလား၊ ဒီအတိုင်းအဆုံးသတ်လိုက်မလားဆိုတာကို ရွေးချယ်ရမှာပါ။ ဒီတော့ အချစ်ရေး အခြေအနေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အဆက်အသွယ် နည်းလာမယ် ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ဆက်ဆံရေးပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာက အဆက်အသွယ်တွေ ပြတ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ...
(၁) အိပ််ရာကနေ ပုံမှန်ထက် ၃၀မိနစ်စောပြီးထပါ။ လေကောင်းလေ သန့်ရှူရှိုက်ပါ။ဒါကသိပ်အကျိုးထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ ဒီအချက်ကအများကြီးကို အကျိုးရှိပါတယ်။ သင်စောစောထခြင်းဖြင့် အလောတကြီး ဘယ်အရာကိုမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ အလောတကြီးမလုပ်တဲ့အတွက် မေ့ကျန်ခြင်း၊ခလုတ်တိုက်ခြင်း စတဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေမတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ အကျိုးဆက်ကတော့ သင်တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုက နေ့တစ်နေ့ရဲ့ပြည့်စံုခြင်းကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ (၂) မနက်မိုးလင်းလို့ ...
၁။ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ခြင်း ( ၁၃ % ) ဘာကိုမှ ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်ရဲ၊ ဟိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင်၊ ဟိုဟာလုပ်ရင် ကောင်းနိူးနိူး၊ ဒီဟာလုပ်ရင် ကောင်းနိူးနိူးနဲ့ အချိန်ကုန် အသက်ကြီးသွားတဲ့ လူများတစ်ပုံကြီးပါ။ မှားမှာကြောက်လို့၊ ဆုံးရူံးမှာ ကြောက်လို့ ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဟာ ချီတုံချတုံကို ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်။ ...
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လျှင်မြန်သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မနက်စာကိုသေချာစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့၊ ရုံးနောက်ကျနေလို့၊ ကျောင်းနောက်ကျလို့ စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ မနက်စာကိုသေချာ မစားဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် မနက်စာကဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ ဘာလို့သေချာစားသင့်လဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။လူအများစုက မနက်စာဆိုရင်သေချာမစားဖြစ်ဘဲ ကော်ဖီတခွက်၊ ပေါင်မုန့်တချပ်နဲ့ပြီးလိုက်ကြတာ များပါတယ်။ မနက်စာဆိုတာ အာဟာရပြည့်ပြည့်၀၀ပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်၊ ...
Instagram မှာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး Cele တွေက ဘယ်သူတွေလဲ
10. Taylor Swift -119.6 Million Followers Pop သီချင်းချိုချိုလေးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Taylor Swiftဟာဆိုရင် Instagramမှာ Follwer အများဆုံး Cele Top Tenစာရင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ Taylorကို ကြော်ကြားစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ datingသတင်းတွေ၊ သူမရဲ့ ချစ်ရေးချစ်ရာ ပြသနာများကို ...
ဝေးဝေးကနေ ရှောင်ကျဉ်သင့်သော လူ(၆)မျိုး
ဘဝခရီးကို ဖြတ်သန်းရာမှာ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ မျိုးစုံ ရှိနိုင်သလို လူပေါင်းစုံကိုလဲ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တချို့က ကိုယ့်ဘဝကို တိုးတက်အောင်မြင်စေနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးနိုင်သလို လူတချို့ကတော့ အမှတ်တရဆိုးတွေ အတွေ့အကြုံအဆိုးတွေကိုသာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအကြောင်းကို သိဖို့နဲ့ မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန်တွေကို ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် လူ(၆)မျိုးကတော့ ...
Group’s Comeback အတွက် ဆံပင် Strawberry Blonde အရောင် ဆိုးပစ်ခဲ့တဲ့ Girls’ Generation’s Sooyoung
Cast တွေကိုယ်တိုင် သည်းထိတ်ရင်ဖိုခဲ့ရတဲ့ Squid Game Episode5ထဲက Glass Stepping Stone ဂိမ်း Behind the Scene